स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयमै चुम्बन गरेको तस्वीर भाइरल, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयमै चुम्बन गरेको तस्वीर भाइरल, अब के हुन्छ ?
एजेन्सी। स्वास्थ्य मन्त्रीले चुम्वन गरेको फोटा भाइरल भएको छ । लायतका स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नै प्रेमिकासँग गरेको चुम्बन भाइरल भएको हो ।त्यही चुम्बनका कारण उनले राजीनामा दिएका छन् । कोराना महामारीको बेला आफ्नी प्रेमिकालाई चुम्बन गरेपछि बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको हो ।
सामाजिक दूरी पालना नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले राजीनामा दिएका हुन ।उनले आफ्नी सहयोगी जीना कोलाडंगेलोलाई कार्यालयमा चुम्बन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई राजीनामा लेख्दै हेनककले यो महामारीमा जति मानिसहरुले बलिदान दिएका छन, त्यो हेर्दा यदि हामी उनीहरुसँग केही गलत गर्छौं भने हाम्रो जिम्मेवारी नैतिकता देखाउनु हुन्छ ।
उनकी सहयोगी जीना एउटै कार्यालयमा काम गर्छिन । त्यसो त उनी विवाहित हुन । उनको बिहे भएको १५ वर्ष पुगेको छ भने तीन छोराछोरी पनि छन् । तर कार्यालयमा कार्यरत जीनासँग उनको अफेयर चल्दै आएको थियो ।
जीना पनि विवाहित हुन । यी दुबैले कार्यालयमा चुम्बन गरिरहेको तस्वीर भाइरल भएपछि मानिसहरुले आलोचना सुरु गरेका थिए । उनले त्यसपछि माफी मागेका थिए ।
यसै गरि , लिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रालाई १९ जुलाइमा पोर्नोग्राफी केसमा गिरफ्तार गरिएको छ । उनीमाथि अश्लील फिल्म बनाएर एपमा अपलोड गरेको आरोप लागेको थियो । यो केसका कारण शिल्पा पनि कानुनी झमेलामा फकिसन् र उनको परिवारको निकै आलोचना भयो । अब शिल्पाले राज कुन्द्रासँग डिभोर्स गर्न लागेको खबर बाहिरिएको छ ।
बलिउड हंगामाको एक रिपोर्टअनुसार राज कुन्द्राका कानुनी लफडाले शिल्पाको लागि समस्या मात्रै थपेको छ । शिल्पाकी एक मित्रले शिल्पाको घरमा चलिरहेका निजी निर्णयहरुबारे कैयौं खुलासा गरेकी छिन् । शिल्पकी साथीले भनिन् ‘उनलाई अनुमान समेत थिएन कि यी हिरा डुप्लेक्स बेइमानीको पैसाबाट आइरहेका छन् ।’ उनकी साथीका अनुसार अब शिल्पा राजले दिएका सामानहरु छुन पनि चाहन्नन् ।
ती साथीका अनुसार शिल्पा आत्मनिर्भर छिन् र आफू र छोराछोरीको ख्याल राख्न सक्छिन् । शिल्पाले फिल्म उद्योगमा पनि आफ्ना नजिकका सहकर्मीहरुलाई आफू हंगामा २ र निकम्मा पनि अरु पनि फिल्ममा काम गर्न इच्छुक भएको बताएकी छिन् । रिपोर्टका अनुसार शिल्पालाई निर्देशकहरु अनुराग बसु र प्रियदर्शनले आफ्नो फिल्ममा अफर पनि गरेका छन् । यस विषयमा शिल्पाले भने आधिकारिक रुपमा केही भनेकी छैनन्
यो पनि , कोकिन तस्करीसँगै अफ्रिकी युवतीको काठमाडौंमा यौन धन्दा
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो एनसिबी ले साउन ९ गते कोकिन कारोबारमा संलग्न नेपाली गिरोह फेला पार्‍याे। एक किलो १४ सय ग्राम कोकिन बरामद गर्दा एक प्रहरी जवानसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेपछि कोकिन तस्करीमा लामो समयपछि नेपाली गिरोहको संलग्नता खुल्यो।
यसमा गोरखाका सुरज गुरुङको समूहलाई ब्युरोले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍याे। जसमा प्रहरी जवान एकराज गुरुङसमेत पक्राउ परेका थिए। हुम्लामा कार्यरत जवान गुरुङ पटकपटक उपचारका नाममा काठमाडौं आउने र तस्करीमा सघाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
पक्राउ पर्नेहरू धेरैजसो गोरखाका थिए। मुकुन्द खड्का, मन गुरुङ, रेशमबहादुर राना गोरखाकै हुन्। अन्तराष्ट्रिय तस्करहरुले नेपालीहरुलाई प्रयोग गरी नेपालमा र तेस्रो मुलुकमा कोकिन तस्करी गर्न थालेको खुलेपछि व्यूरोले थप अनुसन्धान शुरु गर्‍याे।
दक्षिण अमेरिकामा उत्पादन हुने कोकिनको कारोबारमा नेपाली र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकका नागरिक संलग्न छन भन्ने स्पष्ट भएपछि प्रहरीको ध्यान एयरपोर्टमा केन्द्रित हुन थाल्यो। नेपालमा कोकिन प्रयोग गर्ने दुव्र्यसनी खासै छैनन्।
उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँगै मिलेर कारोबार गरेको हुन सक्ने आशंकामा ब्युरोले थप अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा ९ भदौमा तान्जेनियन युवती २६ वर्षीया गेरट्रड लियोनार्ड किमारो, दक्षिण अफ्रिकाका ३० वर्षीय श्रेली गामा र भारतको बैङ्लोर कडाथी कर्नाटक घर भएका ३३ वर्षीय विजय सिंहलाई पक्राउ पक्राउ परे। उनीहरुको साथबाट २ किलो ९६६ ग्राम कोकीन बरामद भयो।
‘हामीलाई शंका लागेकाले साउनदेखिनै अन्तराष्ट्रिय कोकिन कारोवारीको खोजीमा थियौं तर उनीहरुपनि मूख्य कारोवारी होइनन् भरिया मात्रै हुन उनीहरुको सोधपुछको क्रममा खासै सञ्जाल खुल्ने अवस्था छैन’, व्यूरोका प्रवक्ता एसपी जीवन श्रेष्ठले भने।
प्रहरीका अनुसार लियोनार्ड किमारो २०१९ मा स्टुडेन्ट भिषामा प्रदर्शनी मार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसमा नेपाली भाषा अध्ययनको लागि भनेर नेपाल आएकी थिइन। नेपाल आएर उनी राजधानिको क्षेत्रपाटीस्थित एक घरमा फ्याट लिएर महिनाको २० हजार तिरे बसेकी थिइन। विद्यार्थीको रुपमा रहेकी किमारोले नेपालमा रहेर विगत २ वर्षदेखि अवैध गैरकानुनी धन्दा गर्दै आएको पनि प्रहरीको दावी छ।
उनले नेपालमा बसेर अवैध लागुऔषध तस्करीको सहयोगी बन्ने र यौन धन्दा समेत चलाउँदै आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। किमारो एक्लै पक्राउ परिनन् उनीसँग अन्य दुई जना पनि पक्राउ परे। लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका अनुसार किमारो पक्राउ पर्नुअघि दक्षिण अफ्रिकाका ३० वर्षीय श्रेली गामा र भारतको बैङ्लोर कडाथी कर्नाटक घर भएका ३३ वर्षीय विजय सिंहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
भारतीय नागरीक र दक्षिण अफ्रिकाका २ जनालाई भदौ ८ गते नै पक्राउ गरेको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। ३ भदौमा कतार यअरवेजबाट दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनबाट दोहाहुँदै काठमाडौं आएकी ए ०९२६७५१३ पासपोर्ट नम्बर बाहक ३० वर्षीया दक्षिण अफ्रिकन नागरिक गामालाई भदौ ३ गते काठमाडौंको कमलादीस्थित होटलबाट २ किलो ९६६ ग्राम कोकीन सहित बसिन्।
उनी त्यहाँ रहेकै बेला प्रहरीले थप निगरानी गर्दै गयो र साथमा प्रहरीले किमारोको खोजीमा लाग्यो। भारतका ३३ वर्षीय सिंहलाई भने कोकीन लिन आएको अवस्थामा ८ भदौमा कमलादीबाट पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेका गामा र सिंहको सहायताबाट भारत भाग्न लागेकी किमारोलाई भने भदौ ९ गते सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटबाट पक्राउ गरिएको थियो। व्यूरोका प्रवक्ता एसपी श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीले बरामद गरेको उक्त कोकीन जोनेसवर्गबाट दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउन हुँदै कतारको दाहाबाट नेपाल आइपुगेको थियो।
एसपी श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ परेकी गामा जोहानेसबर्गबाट अगस्ट १८ मा केपटाउन एयरपोर्ट पगिन्। केपटाउनबाट उनी कतार एयरलाइन्समार्फत कतारको राजधानी दोहा पुगिन्।
दोहा पुगेकी उनले भारत जाने जमर्को गरिन्। तर सकिनन् त्यहाँबाट उनी सिधै पर्यटन भिषमा नेपाल आइन्। उनी शंकास्पद रुपमा नेपाल छिरेको थाह पाएपछि प्रहरीले उनको निगरानी बढाएको थियो।
प्रहरीका अनुसार एअरपोर्टबाट उनी सिधै लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा पुगेकी थिइन्। कोकीन छ भन्ने खबरका आधारमा प्रहरीले उनलाई निरन्तर निगरानीमा राखिराख्यो। लगभग प्रहरीले ६ दिन निगरानी गर्‍यो निगरानीकै बिच उनी दरबारमार्गस्थित केएफसीमा आएकी थिइन्।
केएफसी आएर उनलाई तान्जेनीयाकी किमारोले सर्भिलेन्स गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो। केएफसीमा केही छिनको बसाईपछि उनी फर्किइन्। तर प्रहरीको निगरानी गरिनै रह्यो। ८ भदौमा उनी कमलादीस्थित एक होटलमा पुगिन्। त्यहाँ भारतका विजय पनि थिए। उनी कोकीन लिन आएका थिए। उनी आएपछि प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गर्‍यो।
प्रहरीले बरामद गरेको २ किलो ९३३ ग्राम कोकीनको मुल्य अन्दाजी ९ करोड पर्न आउने समेत प्रहरीले जनाएको छ। सो कोकीन नेपालबाट भारतको दिल्ली लैजान लागिएको थियो। तान्जेनीयाकी किमारो दुईपक्ष एजेन्टहरुको सहयोगी बन्दै तस्करीमा सहयोग गर्दै आएकी थिइन्।
पक्राउ परेका उनिहरुलाई लागुऔषध नियमन ऐन २०३३ अनुसार १५ वर्षदेखि जन्म कैद र पाँच देखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने कानुन अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ।
अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानले तस्करहरु, बोलिभिया, दक्षिण अमेरिकी मुलुक मेस्किकोमा बसेर भरियामार्फत कोकिन कारोबार गर्दै आएको देखाएको छ।
प्रहरीका अनुसार भरियाहरूले कोकिनको कारोबार दक्षिण अमेरिकी देश पेरु र ब्राजिलबाट सुरु हुने र गन्तव्य अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिकालगायतमा पठाउने गर्छन्। दूरीका हिसाबले उतैको रुट सिधा र निकै नजिक भए पनि सुरक्षित ओसारपसार गर्न लागूऔषध तस्करले दोहा, नेपाल र भारतलाई तार्गेट गर्ने गरेका छन्।
लागुऔषध कोकिन कारोवारीहरुले कोकिन ओसारपसार अपराधमा खासगरी बोलिभियाली, फिलिपिनी, मलेसियाली, दक्षिण अफ्रिकी, थाई, चिनियाँ, पाकिस्तानी, भारतीय, नाइजेरियाली र भेनेजुएलाका नागरिक पक्राउ परेका छन्। तस्करहरूले नेपाली रुट हुँदै कोकिन ओसार्ने भरिया नेपाल पस्नुअघि नै होटलदेखि फर्किने हवाई टिकटसमेत व्यवस्था गरेका हुन्छन्।
प्रहरीबाट जोगिन ह्वाट्स एप र भाइबरमा कुराकानी गर्छन्। तस्करले धेरै उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा बोलिभिया, ब्राजिलको साओपाओलो, इथियोपिया, भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाली विमानस्थल पर्छन्।
कुलमान नियुक्तविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश, कसको पक्षमा सुनायो फैसला ?